Zimbabwe's President Robert Mugabe is seen addressing a crowd in Harare in this August 12, 2013, file photo.
HARARE — Zimbabwean President Robert Mugabe threatened “tit-for-tat” retaliation against companies from Britain and the United States on Sunday if the Western nations persisted in pressuring his government with sanctions and what he called “harassment.”
Mugabe's latest verbal broadside against his main Western critics followed their questioning of his re-election in a July 31 vote that his rival Morgan Tsvangirai denounced as a “coup by ballot” which he said involved widespread vote-rigging.
Mugabe, who at 89 is Africa's oldest leader, has rejected the fraud allegations and was sworn in on Thursday for a new five-year term in the southern African nation that he has ruled since its independence from Britain in 1980.
“They think, we the blacks are inferior, they are superior. But in Zimbabwe we will never accept that a white man, merely because he is white is superior, no. We will chase them away,” Mugabe said about Western powers on Sunday.